Public Limited ကိုစင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - စင်ကာပူရှိ PLC
အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်္ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့နှင့်စင်္ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
Million Makers Singapore သည်စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်နေရာများနှင့်စင်ကာပူမှလွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
သင်၏စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
စင်ကာပူအတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ စင်ကာပူအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ စင်ကာပူအတွက် Virtual နံပါတ်၊ စင်ကာပူအတွက် CRM Solutions၊ စင်ကာပူအတွက် virtual ရုံး၊ စင်ကာပူအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
အရှေ့တောင်အာရှရှိမြို့ပြပြည်နယ်သည်စင်ကာပူကျွန်းနှင့်ကျိုးနွံသည့်ကျွန်း ၅၄ ကျွန်းရှိသည်။ ယခင်ဗြိတိသျှဘုရားဖူးအရောင်းဆိုင်သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်သည်အီကွေတာ၏မြောက်ဘက် ၁၃၇ ကီလိုမီတာ (၈၅ မိုင်) နှင့် Peninsular မလေးရှားတောင်ဘက်တွင်ရှိသည်။ တောင်ဘက်တွင်စင်္ကာပူရေလက်ကြားသည်ကျွန်းအားအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Riau ကျွန်းစုနှင့်သီးခြားခွဲထားသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံသည် ၇၁၈ ကီလိုမီတာအကျယ်အ ၀ န်းရှိပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင်အနိမ့်ဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ လူဇင်ဘတ်၏လေးပုံတစ်ပုံထက်ပိုများသည်သို့မဟုတ်အလားတူပင် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်၏အရွယ်အစားထက် ၃.၅ ဆပိုများသည်။
မြို့ပြပြည်နယ်တွင်လူ ဦး ရေ ၅.၆ သန်းနှင့်လူ ဦး ရေ ၃.၉ သန်း (၂၀၁၆ တွင်) ရှိသည်။ ရုံးသုံးစကားများမှာအင်္ဂလိပ် (အဖွဲ့အစည်း၏ဘာသာစကား)၊ မလေး၊ တရုတ်နှင့်တမီးလ်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ငွေနှင့်ဆိုင်သောအာရုံစိုက်မှု၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အစာစားခြင်း၊
ယနေ့စင်ကာပူသည်မိုနာကိုနှင့်ကပ်လျက်လူ ဦး ရေထူထပ်သောလွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကareaရိယာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယုတ်ညံ့သောလွတ်လပ်သောအစိုးရ၊ ပါရမီရှင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုမရှိသောထင်မြင်ချက်များနှင့်ဈေးနှုန်းများကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေသည့်အပြင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျိုးအမြတ်များသောကုန်ကြမ်းများအတွက်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ထိရောက်သောစည်းမျဉ်းမရှိသောစီးပွားရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဗြိတိသျှနယ်နိမိတ်အတွင်းစီးပွားရေးနှင့်စစ်ရေးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်စင်ကာပူ၏မူဘောင်ကိုတချိန်လုံးဖန်တီးထားသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်စင်္ကာပူသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရရှိပြီးနောက်ဘုရားဖူးလွန်အစိုးရသည်နိုင်ငံ၏မော်တော်ယာဉ်၊
ကုန်းလမ်းအားဖြင့်စင်ကာပူသည် ၉၃၁၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးလမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ၁၉၉.၆ ကီလိုမီတာရထားလမ်းများ (အမြန်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ရထားလမ်းတွဲဖက်ခြင်း) သည်ကျွန်းတစ်ခုလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ယာဉ်ဘောင်သည်ထုတ်လုပ်မှု၊ လုံခြုံမှုနှင့်လျင်မြန်သည်။
ရှည်လျားသည့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်စင်္ကာပူ၏အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းမှာနိုင်ငံ၏နှစ်စဉ်ဂျီဒီပီ၏ ၂၀% မှ ၂၅% ကိုပံ့ပိုးပေးသောတပ်ဆင်ရန်areaရိယာဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ၏အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုများတွင် gadget များ၊ ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဇီဝဆေးပညာသိပ္ပံ၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒီဇိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ 20 ၏နောက်ဆုံးသုံးလပတ်ကနေဒုတိယ, ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်တူတိနှင့်အယူခံအားဖြင့်အမြတ်ဒီဇိုင်းတူသောစည်းနှင့်အတူ 25% အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, စုဝေးareaရိယာ။
စင်္ကာပူ၏တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်နောက်ကွယ်တွင်မဝေးလှချေ။ သူ၏ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းသည်စင်ကာပူ၏စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်နိုင်ငံရေးအရမှီခိုအားထားမှုကြောင့်တည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှစ်သက်သည်။ ဘဏ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိပြီးဒေသဆိုင်ရာဗဟိုဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစီးပွားရေးစင်တာသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၊ နယ်မြေဒေသတွင်းနှင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကဏ္businessများအကြားသတင်းအချက်အလက်၊
စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်စင်ကာပူ၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်စင်ကာပူတွင်တည်ထောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖြေများကိုအစမှအဆုံးသတ်ပေးသည်။ သင်၏အလုပ်နေရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုစင်္ကာပူတွင်ငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ခြင်း၊ စင်ကာပူ၏ virtual နံပါတ်၊ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ စင်္ကာပူတွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စင်္ကာပူတွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ CRM Solutions၊ စင်ကာပူကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ်စင်ကာပူငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ စင်ကာပူရှိ Web development၊ စင်ကာပူရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်ကာပူရှိ Ecommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်ကာပူရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်ကာပူရှိ software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်ကာပူရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - စင်္ကာပူနှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စင်္ကာပူမှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ သင်၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားအင်အားစုများကိုစင်ကာပူတွင်ဖြည့်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှုများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ virtual နံပါတ်များ၊ စင်ကာပူတွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိတရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ စင်ကာပူရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စင်ကာပူရှိလည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ စင်္ကာပူတွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလိုက်နာခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ စင်ကာပူရှိ Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်ကာပူရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စင်္ကာပူတွင်အက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်စင်္ကာပူအတွက်။
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကာပူမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူတောင်မှ ၁၀၉ နိုင်ငံက ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ
စင်ကာပူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
စင်ကာပူကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo COMPANY စင်ကာပူအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း
စင်္ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Apostille of Documents စင်ကာပူစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ
စီးပွားရေးကုမ္မဏီအတွက်စင်ကာပူကုမ္ပဏီ Chop and Seal
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိနောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
စင်ကာပူတွင်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပြပါ
●စင်ကာပူအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်ခ (၁ နှစ်) - ဒေါ်လာ ၂၂၀၀
●စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၄၀၀
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (စင်ကာပူနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
●စင်ကာပူရှိ Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●စင်္ကာပူရှိ Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအခကြေးငွေများကိုတစ်နှစ်ပေးဆောင်ရမည်
●စင်ကာပူရှိ Public Limited ကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ပေးရန်
●စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊
စင်ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်နီးစပ်ရာအခမဲ့အကြံဥာဏ်များပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူနိုင်ငံသို့မဟုတ် ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Public Limited Company Singapore အတွက်ကုန်သည်များစာရင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်စင်္ကာပူ၌တည်၏
အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စင်ကာပူကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတိကျသည့်ဘက်မလိုက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။ စင်္ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်စင်ကာပူရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စင်ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ စင်္ကာပူအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်နှင့်စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်စင်ကာပူကုမ္ပဏီများအတွက်စင်ကာပူရှိကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါမည်။ စင်ကာပူ၊ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းခံရပြီးသင်လျှောက်ထားလိုပါကစင်ကာပူတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စင်ကာပူအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ အဘို့ စင်္ကာပူတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ကာပူရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစင်္ကာပူ၌ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် စင္ကာပူႏုိင္ငံ.
စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်္ကာပူတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီ Incoporation နှင့်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်သိထားသင့်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်သင်၏စင်ကာပူတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုများကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကိုအရေးကြီးသောကြောင့်စင်္ကာပူ၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း - စင်ကာပူ၌ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုပေးစွမ်းပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိစင်ကာပူအပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှပင်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးထိပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူအတွက်အဖြေရှာပေးသူတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်စင်ကာပူရှိ PLC ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်လက်မှတ်ခွဲဝေခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ PLC တွင်လက်မှတ်စာအုပ်။
စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Public Limited Company တွင်စင်ကာပူ၌မှတ်ပုံတင်ထားသော Public Limited ၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်၊ စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်၊ စင်ကာပူရှိ PLC ။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကစင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ၊ စင်ကာပူရှိ PLC ။
အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ / စင်ကာပူရှိ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ / စင်ကာပူရှိ PLC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်စင်္ကာပူတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုချက်ပေးသောစင်ကာပူရှိခွင့်ပြုချက်ပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုင်စင်မဲ့လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ငွေချေးခြင်း၊ စင်ကာပူရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ စင်ကာပူရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ စင်္ကာပူတွင်လဲလှယ်ခြင်း၊
စင်ကာပူရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ စင်္ကာပူရှိ Forex အကျိုးဆောင်များသို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်များအတွက်လိုင်စင်ရယူရန်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
စင်္ကာပူနှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများသည်စင်ကာပူတွင်သာမကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စင်ကာပူရှိ Professional CFA တို့နှင့်လည်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စင်္ကာပူတွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စင်ကာပူနှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ ခုတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။
စင်ကာပူရှိ Corporate Services | SG အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စင်္ကာပူတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူရှိစီးပွားရေးအကြံပေးများ၊ စင်ကာပူရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ စင်ကာပူရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ စင်္ကာပူရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စင်္ကာပူရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စင်ကာပူရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စင်ကာပူရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
စင်္ကာပူရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | SG အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
စင်ကာပူနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် စင္ကာပူႏုိင္ငံ.
စင်္ကာပူရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်သင်ဆက်သွယ်ပြီးသင်အပြင်သို့သွားနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို စင်္ကာပူမှာ။
HR အတိုင်ပင်ခံ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပေးအပ်ထားသည့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စင်ကာပူတွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ Ready Made ကုမ္ပဏီသည်စင်္ကာပူတွင်ပြုလုပ်သည် စင်္ကာပူနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းစင်္ကာပူမှာ
စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ စင္ကာပူႏုိင္ငံ.
စင်္ကာပူတွင် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် စင်္ကာပူမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုအတွက်။
CRM ဆော့ဝဲ သင်၏စင်္ကာပူရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ကူညီသည်၊ စင်ကာပူရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ။
Virtual Number - စင်ကာပူအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် စင်ကာပူရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်စင်ကာပူရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များစင်ကာပူရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း စင္ကာပူႏုိင္ငံ စင်ကာပူတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
စင်ကာပူရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စင္ကာပူႏုိင္ငံ, စင်ကာပူရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စင်ကာပူရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်ခြင်း စင်္ကာပူတွင်စျေးသက်သာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
တစ် ဦး ချင်း၊ စတင်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စင်ကာပူတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်စင်ကာပူတွင်ပါ ၀ င်ရန်စင်္ကာပူ၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်ရှာဖွေနေသည်။ စင်္ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီမည့်အရာများအနက်စင်ကာပူတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိနေထိုင်သူများနှင့်စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုစင်ကာပူတွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်္ကာပူတွင်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စင်္ကာပူရှိကမ်းလွန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Offshore Public Limited Company ကိုစင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်္ကာပူကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်္ကာပူကမ်းလွန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Public Limited ၏စင်ကာပူတွင်အများပိုင်လီမိတက်တည်ထောင်ရန်အထောက်အပံ့ | စင်ကာပူတွင် PLC ပါဝင်မှု
စင်ကာပူရှိ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန် PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိ Offshore PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုစင်ကာပူရှိနေထိုင်သူများနှင့်စင်ကာပူရှိ PLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စင်ကာပူ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူကမ်းလွန် PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူကမ်းလွန် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Public Limited ကိုစင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ စင်ကာပူတွင် PLC ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစင်္ကာပူမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အထောက်အပံ့များမှာ - စင်ကာပူဒေါ်လာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
စင်္ကာပူတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | စင်ကာပူဒေါ်လာအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည်စင်ကာပူရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်စင်္ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ စင်ကာပူရှိမြို့များရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ကူညီသည်။ , စင်ကာပူဒေါ်လာရှိစင်ကာပူဒေါ်လာရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးဆောင်များ SG အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးတယ်။ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
စင်္ကာပူတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူဒေါ်လာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ စင်ကာပူဒေါ်လာကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ စင်ကာပူဒေါ်လာအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်ဖြင့်စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ စင်ကာပူဒေါ်လာတွင်နိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုစင်ကာပူ | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုစင်တာများ
စင်္ကာပူတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးကိုစင်္ကာပူတွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
စင်္ကာပူတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု SG တွင်ထည့်သွင်း
Public Limited Company ၏စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား စင်ကာပူတွင် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း?
ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိနေထိုင်သူများနှင့်နေထိုင်သူများကိုစင်ကာပူအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ စင်ကာပူအများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းစင်ကာပူကမ်းလွန်အများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်္ကာပူတွင်ကမ်းလွန်အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူတွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားသောအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီ၊ စင်ကာပူအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံသားများအပြင်စင်ကာပူ PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်္ကာပူရှိကမ်းလွန် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူတွင် PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူ PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူကမ်းလွန် PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူကမ်းလွန် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန် PLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စင်ကာပူရှိကမ်းလွန် PLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ration, စင်ကာပူတွင် PLC ပါဝင်သည်။
စင်ကာပူရှိအများပိုင်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပါ စင်ကာပူတွင် PLC ကိုထည့်သွင်းပါ
ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများ | ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏စင်ကာပူတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစု ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ Company Incorporation အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပမာဏနှင့်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်များအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုစင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးသည်။ စင်္ကာပူတွင်စင်္ကာပူရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင့်အားစင်္ကာပူတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
စင်္ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ စင်္ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်စင်ကာပူရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
စင်ကာပူတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားကိုစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးကူညီသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစင်ကာပူမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အကယ်၍ သင်သည်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်းစင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်၊ စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်စင်ကာပူတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ SG ။
စင်္ကာပူတွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း SG အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု
နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန (MFA)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (IE) စင်ကာပူ
Fraser နှင့် Neave (F&N)
Wilmar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ - စိုက်ပျိုးစီးပွားလုပ်ငန်း၊Keppel ကော်ပိုရေးရှင်း ကုမ္ပဏီသည်အဏ္ဏဝါ၊ အိမ်ခြံမြေနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
SembCorp မရိန်း Sembcorp Marine သည်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကုမ္ပဏီသည်စင်ကာပူတွင်ရုံးစိုက်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - စင်ကာပူ
FAO - စင်ကာပူ
ဘီဘီစီနိုင်ငံအကြောင်း - စင်ကာပူ
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - စင်ကာပူ
အမွေအနှစ်ဖောင်ဒေးရှင်း - စင်ကာပူ
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - စင်ကာပူ
စင်္ကာပူ - နိုင်ငံလေ့လာမှု
Civic District ရှိကြယ် ၅ ပွင့်ဟိုတယ်။
မြို့၏ခမ်းနားဟောင်း Dame ၏ပင်မစာမျက်နှာ။
စျေးဝယ်ခြင်း - Great Singapore Sale
Oversa-China Banking Corporation Limited
အမေရိက၏ BANK, National Association
CIMB ဘဏ် BERHAD တရုတ်ဘဏ်လီမိတက်
အရှေ့အာရှ, LTD ၏ဘဏ်
တိုကျို - မစ်ဆူဘီရှီ UFJ, LTD ၏ဘဏ်
CITIBANK NA ဘဏ် Chartered ဘဏ်
SUMITOMO MITSUI ဘဏ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
RHB ဘဏ် BERHAD
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်စင်ကာပူရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း (သို့) စင်္ကာပူထဲမှ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်စင်္ကာပူ၏ဥပဒေအရလူမည်းစာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစင်ကာပူမှာဖြစ်စေ၊ စင်္ကာပူမှာဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ (သို့) ကုမ္ပဏီတွေကိုပေးမထားဘူး။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်သောဇီဝဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများသို့စင်္ကာပူမှသို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်ဓာတုပစ္စည်းများကိုစင်ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်ကာပူမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ကိရိယာများသို့ပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုစင်္ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်ကာပူရှိသို့မဟုတ်စင်္ကာပူသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။
●အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်စင်္ကာပူတွင်ဖြစ်စေ၊ စင်္ကာပူမှဖြစ်စေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်ကလေးမွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်စင်ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်စင်္ကာပူမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးမထားဘူး။
●ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်မပြု။
●စင်္ကာပူအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှသို့မဟုတ်စင်ကာပူနိုင်ငံသို့သွားမသွားဘူး။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် စင္ကာပူႏုိင္ငံတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် စင္ကာပူႏုိင္ငံ, စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဘဏ်အကောင့်, စင္ကာပူႏုိင္ငံ ယုံကြည်မှု စင္ကာပူႏုိင္ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု စင္ကာပူႏုိင္ငံ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ စင်္ကာပူအတွက်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-singapore-plc/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-singapore-plc/